Android 9.0 Pie izao mifanaraka amin'ny DualShock 4 sy Xbox One gamepad | Androidsis
Ny fampifanarahana tsara kokoa eo amin'ny telefaona sy ny tontolon'ny console dia nampanantenaina kelikely. Tamin'ny farany, Google dia nanatanteraka io fampanantenany io tamin'ny fahatongavan'ny Android 9.0 Pie. Hatramin'ny farany ny kinova vaovao an'ny rafitra fiasa dia farany mifanaraka amin'ny gamepad Sony DualShock 4 sy Xbox One. Izay dingana lehibe amin'ny fampidirana sy fifandraisana tsara eo amin'ny sehatra.
Nampahafantarina herinandro vitsivitsy lasa izay fa Android 9.0 Pie dia hanamora ity karazana fanatsarana sy fampifanarahana ity. Ary i Google dia efa mamela antsika amin'ny dingana voalohany amin'ity resaka ity. Vaovao iray izay azo antoka fa raisin'ireo mpampiasa tsara.
Ny telefaona Sony Xperia irery ihany no nahazo an'io fanohanana io. Ka ireo mpampiasa finday avy amina marika hafa ireo dia ho afaka hampiasa io asa io ihany koa, noho i Google. Sony dia nanampy ny orinasa tamin'ity fampandrosoana ity.
Satria ny orinasa dia niara-niasa tamin'ny mpandraharaha Android, ka ny fandrafetana ny bokotra rehetra sy ny fiasan'ny DualShock 4 dia ho tafiditra ao amin'ny Open Source Project an'ny rafitra miasa. Ka tamin'ny fahatongavan'ny Android 9.0 Pie dia efa ofisialy. A) Eny, Mitahiry vola amin'ny fampiasana lisansa na fifanarahana izy ireo. Birao ambany kokoa.
Raha mihoatra ny Xbox ianao dia misy vaovao tsara koa. Araka ny Android 9.0 Pie koa dia mifanaraka amin'ny mpanara-maso / gamepad Xbox One. Ka nisy koa ny fiaraha-miasa tamin'ny Microsoft nataon'i Google hanatanterahana izany.
Ireo fifanarahana ireo dia midika fa manokatra varavarana bebe kokoa amin'ny tontolon'ny lalao video ny telefaona. Izao ihany no zavatra banga dia izay telefaona amin'ny tsena android manomboka mahazo vaovao farany. Efa misy ny maodely izay ao amin'ny dingana beta, ka amin'ity fararano ity dia tokony hisy ny fanavaozana maharitra voalohany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Android Version » Android 9.0 Pie dia mifanaraka amin'ny gamepad Sony DualShock 4 sy Xbox One izao